lll ᐅ Ezabasebenzi Tarot SIMAHLA | Ukusasazeka kweKhadi le-2019
Ukwazi ikamva lomsebenzi wakho, sikubeka ukuze ube nakho dibana neTarot yoMsebenzi. Dlala amakhadi kwaye ufumane iinkcukacha eziza kubanjwa lihlabathi lakho lomsebenzi ukuze ukwazi ukuthatha izigqibo ezifanelekileyo.
Unako jula i amakhadi e-tarot sebenza kwi-intanethi kwaye simahla, iimpendulo ziphumelele kwaye uya kuba nakho ukuzilungiselela ngokuzithemba ngakumbi kwindawo osebenza kuyo usazi kwangaphambili ukuba kuzakwenzeka ntoni kuwe. Iimpawu zokufumanisa kwi-intanethi ziya kutyhila indawo okufuphi kuyo.
1 Tarot yasimahla yomsebenzi enamakhadi amathathu
2 Ukufundwa kwekhadi ukwazi indawo oya kuyo emsebenzini
2.1 Imibuzo kwi-tarot yomsebenzi
Tarot yasimahla yomsebenzi enamakhadi amathathu
Ndiyabulela Isimangalo somsebenzi unokuqhagamshelana simahla Ukutshatisa, kufuneka ukhethe amakhadi amathathu kuphela. Inkqubo ilula, ileta yokuqala iyahambelana nexesha elidlulileyo, ileta yesibini iyahambelana ngoku kwaye ileta yesithathu iya kwikamva okanye kwikamva.
Omnye Umfundi we-tarot eyiyo uya kuyiphendula imibuzo kunye nemibuzo malunga nomsebenziokanye. Ungalibali ukuba ukubonisana kukwi-Intanethi kwaye simahla. Khululeka umamele ntoni isihomo sifuna ukukuxelela.
Ukufundwa kwekhadi ukwazi indawo oya kuyo emsebenzini
I-tarot yomsebenzi yile ukusasazeka kwekhadi endala ekhoyo, kufuneka ukhethe amakhadi amathathu kwaye ubuze umbuzo ngengqondo ngomoya opholileyo.
Shuga amakhadi amatyeli aliqela ngelixa ucinga nge buza ukuba uza kwenza ntoni kwitotot yomsebenzi.
Imibuzo kwi-tarot yomsebenzi
Sikushiya uthotho lweenkxalabo ezibuzwa uninzi lwethotot yabasebenzi malunga nekamva lomsebenzi wakho:
Ngaba kufuneka nditshintshe imisebenzi?
Xa siziva sididekile kwaye singazi ukuba senze ntoni, sidinga umntu oza kusicacisela le mibuzo ingaphendulwanga. Ke ngoko, ukuba ufuna ukutshintsha umsebenzi wakho wangoku, buza le mibuzo kwi-oracle yomsebenzi kwaye ucime amathandabuzo akho.
Ndiza kuwufumana umsebenzi wam wephupha?
Amaxesha amaninzi asisebenzi kuba umsebenzi esiwufunayo awufiki, nokuba kungenxa yokuba sifunda into kwaye asikafumani msebenzi wamaphupha ethu. Ke ngoko, ukuba awazi ukuba kwixa elizayo uza kusebenza njengoko ubusoloko ufuna, nge i-tarot yomsebenzi onokuyicela simahla nakwi-intanethi.
Ngaba ndiza kuyeka ukumthiya umphathi wam?
Siyazi ukuba ukuhlalisana kwindawo yokusebenza kunzima xa abaphathi bethu benzima kwaye bengasivumeli sihlale ngoxolo. Kungenxa yoko le nto ukuba unomphathi owonakalisa imood yakho, kunye ne-tarot yomsebenzi izakunceda wenze isigqibo osidingayo.
Ngaba baya kundinyusa?
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba uza kunyuselwa emsebenzini kungekudala? Umfundi we-tarot e-discover.online uya kuwatolika amakhadi owakhethileyo ukuze intsingiselo yokuxela ithamsanqa ikunike impendulo ecacileyo necacileyo kwikamva lakho.
Ngaba ndiza kusombulula ukungavisisani nomntu endisebenza naye?
Sonke ngexesha elithile ebomini bethu siye sahamba kakubi nabantu esisebenza nabo, nokuba kungenxa yokungahambelani kwabalinganiswa, okanye umona, yiyo loo nto itotot iya kukunika impendulo oyifunayo kwaye ikuncede uthathe isigqibo esifanelekileyo.
Ngaba ndiza kuyiphumelela udliwanondlebe lomsebenzi?
Xa usenza udliwanondlebe lomsebenzi, kwaye bakuxelela ukuba ukuba ukhethiwe baya kukubiza, sikhathazekile. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba sinike impendulo yokubeka ukungaqiniseki ecaleni.
Ndiza kufumana imali?
Sonke sifuna ukunyuselwa, ngakumbi xa siyifumana. Ndiyakukhuthaza ukuba ubuze lo mbuzo kwindawo yezabasebenzi. Sula amathandabuzo ngempendulo yeeleta.
Ngaba kufanelekile ukuba ndamkele omnye umsebenzi ndiyeke nomsebenzi wam wangoku?
Awazi ukuba wenzeni? Ngaba uyeke umsebenzi wakho wangoku ozinzileyo kwaye wamkela umsebenzi omtsha? Ngaba uyoyika imingeni emitsha? Ngaba iya kulungela? Kuthekani ukuba bandigxotha kungekudala? Kunye ukusasazeka kwamakhadi kwiTarot yoMsebenzi uya kususa amathandabuzo!